သင်ကဘယ်လို ဖခင်မျိုးလဲ? – Tameelay
လူမှုဘ၀, သမီးလေးဖတ်ဖို့, အထွေထွေဗဟုသုတ
သင်အလုပ်မှ အိမ်ပြန်လာလျှင် သင့်ကလေးငယ်လေးတွေသင့်ဆီပြေးလာကြလား။
ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုမြင်တာနဲ့ ရှောင်ပြေးသွားကြလား။
သင်ကရော ငါဟာကလေးတွေချစ်ခင်ရတဲ့ ဖခင်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူမလား။
ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေကြောက်ရွံရိုသေရတဲ့ ဖခင်ဆိုပြီးဂုဏ်ယူနေမလား။
အလုပ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အလုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ကလေးနှင့် ကလေးးအမေကို ပြုံးပြပြီး အိမ်ထဲဝင်တဲ့ဖခင်လား။
အလုပ်ကပင်ပန်း ဒေါသကထွက် မျက်နှာထားထား ပုပ်ပုပ်। တည်တည်နဲ့ အိမ်ထဲဝင်တတ်တဲ့ ဖခင်မျိုးလား။
ကလေးတွေကို ကစားစရာတွေနဲ့ပဲလွှတ်ထားတဲ့ ဖခင်လား।ကလေးတွေနဲ့အတူကစားပေးတဲ့ ဖခင်လား။
ကလေးတွေရှေ့မှာ ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းသော စကားလုံးတွေကိုသုံးတဲ့ဖခင်လား। ကလေးအနားမှာရှိလျှင် အပြောအဆို ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ဖခင်တယောက်လား။
ကလေးရှေ့မှာ သူ့အမေနဲ့ ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဖခင်လား। သူ့အမေကို ဝိုင်းကူပေးတဲ့ ဖခင်လား။
ကလေးနားမှာဆေးလိပ်သောက်ပြီး ကလေးအဆုတ်ကိုဖျက်ဆီးပေးတဲ့ဖခင်လား। ကလေးနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်အားကစားလုပ်ပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းအောင်ကူညီပေးတဲ့ဖခင်လား။
ကလေးကို အချိန်ပေးတဲ့ ဖခင်လား। iPhone ကိုပဲအချိန်ပေးတဲ့ ဖခင်လား။
မနေ့က ဆေးခန်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးမလေး တယောက်ရဲ့ ၄၅-မိနစ်ကြာကြာ ငိုယိုပြီး ရန်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေအကြောင်း နားထောင်ပြီးနောက် အဖေများကို အဖေတယောက်က အချင်းချင်း သတိပေးသည်ဟုပဲ မှတ်ယူပါ။
မိဘသည် ကလေးတဦး၏ ဘဝတွင် ပထမဦးဆုံးသော သင်ဆရာ। မြင်ဆရာ। ကြားဆရာဖြစ်သည်။
သငျအလုပျမှ အိမျပွနျလာလြှငျ သငျ့ကလေးငယျလေးတှသေငျ့ဆီပွေးလာကွလား။
ဒါမှမဟုတျ သငျ့ကိုမွငျတာနဲ့ ရှောငျပွေးသှားကွလား။
သငျကရော ငါဟာကလေးတှခေဈြခငျရတဲ့ ဖခငျဆိုပွီး ဂုဏျယူမလား။
ဒါမှမဟုတျ ကလေးတှကွေောကျရှံရိုသရေတဲ့ ဖခငျဆိုပွီးဂုဏျယူနမေလား။
အလုပျမှာ ဘာပဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ အလုပျမှ အိမျပွနျရောကျလြှငျ ကလေးနှငျ့ ကလေးးအမကေို ပွုံးပွပွီး အိမျထဲဝငျတဲ့ဖခငျလား။ အလုပျကပငျပနျး ဒေါသကထှကျ မကျြနှာထားထား ပုပျပုပျ। တညျတညျနဲ့ အိမျထဲဝငျတတျတဲ့ ဖခငျမြိုးလား။
ကလေးတှကေို ကစားစရာတှနေဲ့ပဲလှတျထားတဲ့ ဖခငျလား।ကလေးတှနေဲ့အတူကစားပေးတဲ့ ဖခငျလား။
ကလေးတှရှေမှေ့ာ ကွမျးတမျးရိုငျးစိုငျးသော စကားလုံးတှကေိုသုံးတဲ့ဖခငျလား। ကလေးအနားမှာရှိလြှငျ အပွောအဆို ဆငျခွငျတတျတဲ့ ဖခငျတယောကျလား။
ကလေးရှမှေ့ာ သူ့အမနေဲ့ ရနျဖွဈတတျတဲ့ ဖခငျလား। သူ့အမကေို ဝိုငျးကူပေးတဲ့ ဖခငျလား။
ကလေးနားမှာဆေးလိပျသောကျပွီး ကလေးအဆုတျကိုဖကျြဆီးပေးတဲ့ဖခငျလား। ကလေးနဲ့အတူ လမျးလြှောကျအားကစားလုပျပွီး ကနျြးမာသနျစှမျးအောငျကူညီပေးတဲ့ဖခငျလား။
ကလေးကို အခြိနျပေးတဲ့ ဖခငျလား। iPhone ကိုပဲအခြိနျပေးတဲ့ ဖခငျလား။
မနကေ့ ဆေးခနျးမှာ ဆယျကြျောသကျကလေးမလေး တယောကျရဲ့ ၄၅-မိနဈကွာကွာ ငိုယိုပွီး ရနျဖွဈတဲ့မိဘတှအေကွောငျး နားထောငျပွီးနောကျ အဖမြေားကို အဖတေယောကျက အခငျြးခငျြး သတိပေးသညျဟုပဲ မှတျယူပါ။
မိဘသညျ ကလေးတဦး၏ ဘဝတှငျ ပထမဦးဆုံးသော သငျဆရာ। မွငျဆရာ। ကွားဆရာဖွဈသညျ။
ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတားကြီးအောက်က တိမ်မြုပ်နေတဲ့ ဂူကြီး
ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတားကြီးအောက်က တိမ်မြုပ်နေတဲ့ သဘာဝအလှတရား ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ် တံတားကြီးကိုတော့ တော်တော်များများသိကြပေမယ့် .. ဂုတ်ထိပ်တံတား အောက်တည့်တည့်မှာ ရှိနေတဲ့ ဒီဂူကြီးကိုတော့ သိတဲ့လူနည်းပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဂုတ်ထိပ်တံတားပေါ်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လဲ ဂူပေါက်ဝကို တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲ ဂူထဲကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ စီးဝင်နေတဲ့ ချောင်းလေးကိုသာ အပေါ်စီးကနေ မြင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီတံတားကြီးရဲ့ …
လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သော အချက်များ
၂၁ ရာစုအတွင်းမှာ လူငယ်တွေဟာ လူကြီးတွေထက်ပိုပြီးနေရာယူလာကြသလို ကမ္ဘာကြီးကိုဦးဆောင်လာနေကြပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးအစရှိသဖြင့်ပေါ့။ စီးပွားလောကမှာဆိုရင်လည်း လူငယ်တွေဟာ ဦးဆောင်နေကြပါပြီ။ လေ့လာချက်တွေအရ အသက်၁၈ ကနေ ၂၁ နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေဟာ ၃၀% ထိတိုးတတ်လာပြီလို့ ဆိုကြပါတယ်။ သင်တကယ်လို့ စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ်လို့ စီစဉ်နေရင် ၊ …
အိုဗားမားမိန်းမရဲ့အဖြေကိုအရမ်းကြိုက်တယ် (မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ခွန်အားဖြည့်စာ)
ယောက်ျားကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ စွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမတချို့ ဘဝပျက်မတတ် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်.. အမှန်က ပျော်ရမှာပါ…. လက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စွာပျော်ရမှာပါ…. ကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့အတွက် က်ိုယ့်တန်ဖိုးနားမလည်တဲ့လူရဲ့ဘေးနား အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြတ်သန်းရခြင်းထက် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမဲ့စွာ ဘဝကို လွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ရခြင်းက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ရင် …